Ishibashi Internal Medicine Group Recruiting Page
ဤေလာကသည္ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လုိင္စင္မ်ားကုိပုိင္ဆုိင္ေသာသူမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာအထူးေလာကတ ရပ္ျဖစ္ပါသည္။လူအမ်ားအျပားသည္လုိင္စင္ကုိရရွိရန္အတြက္အလြန္ႀကိဳးစားအားထုတ္လ်က္ရွိၾကပါသည္၊သုိ႔ ေသာ္လည္းအခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚမူတည္ၿပီးလုိင္စင္၏အဆင့္အတန္းအနိမ့္အျမင့္အရပိရမစ္ပံုအဖြဲ႕အစည္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။မ်ားေသာအားျဖင့္ဆရာဝန္သည္အျမင့္ဆံုးႏွင့္အရာအရပ္ရပ္သည္လည္းအႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲ မႈအရတုိးတက္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္အီရွီဘရွီအေထြေထြေဆးရံုတြင္လူနာႏွင့္အသံုးျပဳသူတုိ႔ႏွင့္တုိက္ရုိက္ပင္ျဖစ္ေစသြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ ပတ္သက္ေနေသာဝန္ထမ္းမ်ား၊ဥပမာ ဆရာဝန္မ်ား၊သူနာျပဳမ်ား၊ကုထံုးပညာရွင္မ်ား၊ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ အဟာရပညာရွင္မ်ား၊စားဖုိဝန္ထမ္းမ်ား၊အႀကိဳအပုိ႔ယဥ္ေမာင္းဝန္ထမ္းမ်ား၊ဧည့္ႀကိဳေကာင္တာဝန္ထမ္းမ်ား၊ကြန္ဆီရာ့ဂ်ီစေသာဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးတေျပးညီတည္းသတ္မွတ္ထားရွိပါသည္။ ဝန္ထမ္းအားလံုးမိမိတုိ႔၏ကြၽမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိအသင္းအလုိက္အတူတကြျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္း၊လႈပ္ရွားပန္႔ပုိးေပးျခင္း၊ျပသနာကုိအတူတကြရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
တနည္းအားျဖင့္ ခက္ခဲေသာေလာကဟုလည္းေျပာႏုိင္ပါသည္။ဝန္ထမ္းအားလံုးအတူတကြပူးေပါင္း၍တူညီ ေသာပန္းတုိင္ကုိေလ်ာက္လွမ္းမွသာလူနာမ်ား၏အက်ဳိးကုိေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္၊သုိ႔မ ဟုတ္ပါကေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိလည္းရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ထုိလႈပ္ရွားခ်က္မ်ားကုိအစဥ္အၿမဲဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္လုိအပ္ပါသည္။ေသးငယ္ေသာအေၾကာင္းအရာအတြက္ကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရန္အခ်ိန္မရွိပါ။က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းတြင္အလုပ္လုပ္ကုိင္လုိပါကဦးစြာမိမိကုိယ္ကုိေမးျမန္းစမ္းစစ္ပါ။ "ဒီမွာမိမိသည္ဘာကုိလုပ္ခ်င္သလဲ?"ထုိအခါသင္သည္အဆံုးမရွိေသာက်ယ္ဝန္းသည့္ေလာကႀကီးႏွင့္သင္၏အံ့ဩစရာေကာင္းေလာက္ေသာလြပ္လပ္မႈတရပ္ကုိေတြ႕ရွိခံစားႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Etsuzi Ishibashi
အနုပညာ Himeji City, ပြတိုက်
အနည်းငယ်မိုးရွာသွန်းမှု / မိုးရွာသွန်းမှုရက်ပေါင်း =
အနည်းငယ်တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း / ရေလွှမ်းမိုးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု =
သငျသညျ Ishibashi ပြည်တွင်းဆေးပညာအတွက်မဆိုသူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်ဆွေမျိုးသားချင်းများရှိပါသလား?
▶ ဂီယာ contents တွေကိုအတည်ပြုပါ
Customer များ '' ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများအဘို့အခြေခံပညာသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ
လျှော့စုပေါင်း "ဟုအဆိုပါကုမ္ပဏီ" အဖြစ်ရည်ညွှန်းထားတဲ့ Ishibashi ပြည်တွင်းဆေးပညာ Group မှ။ ) "ကိုယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြထားရမည်
1. စုစည်းမှု, အသုံးပြုခြင်းနှင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ၏ဖြန့်ဖြူး
အဆိုပါကုမ္ပဏီမှသာအောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းမည်: ဖလှယ်သတင်းအချက်အလက်, ကြေညာချက်များသို့မဟုတ်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပေးပို့ခြင်း , လူမှုရေးဓလေ့ထုံးစံများကအောက်ပါအရောင်းအဆက်စပ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကန်ထရိုက်၏နိဂုံးချုပ်ခြင်းနှင့်သေဒဏ်စီရင်ခြင်း, သည်အခြားအရောင်းအစီမံခန့်ခွဲခြင်း။ ထိုကဲ့သို့သောစုဆောင်းခြင်းကိုအခြားအပိုဆောင်းရည်ရွယ်ချက်များကိုဖန်ဆင်းသောအခါကုမ္ပဏီရည်ရွယ်ချက်များရှင်းလင်းနှင့်သင့်ရယူဦးမည် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်။
အဆိုပါအုပ်စုအားလုံး Ishibashi ပြည်တွင်းဆေးပညာတို့တွင်အသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်မျှဝေနိုင်ပါသည် Group မှသို့သော်ခွဲဝေမှု၏ကြိုတင်ကြေငြာချက်နှင့်အတူဒါပြုလိမ့်မည်။
ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး 3. လေးစား
အဆိုပါ Group မှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှငျ့ပတျသကျသောသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခွင့်အရေးများကိုလေးစားပါလိမ့်မယ်။ အကယ်. သင်က သင့်ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များ၏ထုတ်ဖော်တောင်းဆိုရန်, အုပ်စုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကျိုးကြောင်းဆီလျော်အရှည်အတွင်းတွင်လုံလောက်သောအဖြစ် insofar လိုက်နာပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်သငျသညျကိုတောင်းဆိုပါလျှင် သင့်ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုဆုံးမခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲမှု, အုပ်စုသည်သင်၏ဖော်ထုတ်ခြင်းသာလျှင်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သလိုအတိုကာလအတွင်းလိုက်နာပါလိမ့်မယ် မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြု။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြန်ကြားရေး 4. သင့်လျော်စီမံခန့်ခွဲမှု
အဆိုပါကုမ္ပဏီအသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကာကွယ်ပေးရန်သင့်လျော်သောလုံခြုံမှုကိုအတိုင်းအတာအကောင်အထည်ဖော်လိမ့်မယ် ကျနော်တို့စုဆောင်းလုံလောက်သောခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အစီအမံများ, မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု, ယိုစိမ့်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုယူအချက်အလက်တွေကို။
အဆိုပါဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူ 5. လေးစားလိုက်နာခြင်း
အဆိုပါ Group မှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှငျ့ပတျသကျသောဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာကြလိမ့်မည် ဂျပန်တွင်သတ်မှတ်သောအဖြစ်ကုမ္ပဏီ၏စည်းမျဉ်းများ။
ကိုယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ 6. အဆက်မပြတ်တိုးတက်မှု
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုနှင့် ပတ်သက်. 7. စုံစမ်းရေးကော်မရှင်
အဆိုပါအုပ်စု Ishibashi အတွင်းပိုင်း၌အကြှနျုပျတို့၏ဘုံအဆက်အသွယ်အဖြစ်အောက်ပါစာမျက်နှာကိုအသုံးပြုပါလိမ့်မယ် ဆေးပညာ Group မှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များကိုလက်ခံရရှိရန်။
မူပိုင် © Ishibashi Internal Medicine အုပ်စု
စုဆောင်းရေးစာမျက်နှာ co ။ , Ltd ။